China Dongshen ambongadiny fanao manokana marika ambony kalitao malefaka volom-bolo resin volo tantana ny volon-doha volom-borona ho an'ny lehilahy mpanamboatra sy mpamatsy | Dongmei
Dongshen ambongadiny fanao manokana marika manokana kalitao malefaka volom-bolo resin volo mitana tarehy volon-doha ho an'ny lehilahy
Ny borosy fanaratsiana Dongshen dia vita tanana amin'ny volo Silvertip voajanahary sy tantana resin. Natao hanalefaka ny volombava alohan'ny aharatra, tsy misy mahasosotra ny hoditra. Tsy misy fihenan'ny volo, tsy misy fatiantoka tantanana, manala ny sakaizanao maharitra amin'ny fombafombam-bolo isan'andro.
Fitaovana fatotra Volom-bolo (volo mihombo silvertip).
● Borosy vita tanana vita amin'ny volo badger 100% - Extra Dense koa. Lehilahy mahafinaritraBorosy fiharatana, fa ny Vehivavy koa tia azy!
● Mamokatra volondavenona mahafinaritra miaraka amin'ny savony manaratsy tianao indrindra. Ny volonay Badger Premium no voamadilo silvertip avo lenta indrindra, ary ny fatotra borosinay vita tanana dia haharitra taona maro rehefa voakarakara tsara.
Ny borosy fiharatana «bigger» lafo indrindra. Ny borosy silvertip tena izy dia manana tendrony fotsy izay mirehitra, malefaka, mamela ny fitanana rano betsaka indrindra. Diniho foana ny iray amin'ireo borosy fiharatana ireo alohan'ny hividianana mba hahazoana antoka fa nahazo ny tena fifanarahana ianao. Mampalahelo fa mahazatra ny volo ambony indrindra na volon-koditra vita amin'ny volafotsy amin'ny faran'ny azy ho toy ny volo silvertip. Na samy borosy premium aza ny badge super sy ny silvertip, ny badger silvertip no lafo indrindra sy lafo vidy indrindra noho ny fahita aminy, ny volony ary ny fihazonany rano ambony.
Mba hamaritana raha misy borosy mitondra tena volo 'silvertip' tena ilainao ny manadio ny lokon'ny volomaso. Ny borosy 'silvertip' tena izy dia misy toro-hevitra izay fotsy fotsy.
Dongshen dia manolotra karazan-borosy fiharatana vita tanana. Ny borosintsika dia misy karazana sy karazana volom-borona samihafa hahitana izay tiana rehetra. Ny hakitroky sy ny fahalemen'ny volombava dia misy fiantraikany amin'ny fihoaram-pefy, ohatrinona ny rano tazonin'ilay borosy ary ny hatevin'ny volon-koditra noforonina.
Ny borosy Badger Brushes no kilasy malefaka indrindra. Izy ireo dia mitazona rano be dia be ary mamorona lather tena tsara. Mpanety be mando maro no aleony borosy badgeza noho ny fahalemeny. Ny sasany kosa tia ny salan'isan'ny badger, indrindra ireo manana hoditra marefo.
Ny borosy fanoratan'i Dongshen dia vita amin'ny tànana amin'ny fampiasana ireo fitaovana tsara indrindra ihany.
Teo aloha: Dongshen avo lenta voajanahary matanjaka roa tarika badger volo resin mitana fanao logo lehilahy lena borosy fiharatana
Manaraka: Dongshen fiharatana borosy tsara indrindra volom-bolo manga resin mitantana marika manokana haben'ny olon-dehibe borosy fiharatana
Manaratsy Silvertip borosy
Voamarika manokana fa borosy makiazy namboarina namboarina ...
Namboarina manokana marika ambongadiny ambongadiny 12 pcs nitsangana ...
Momba ny tontolo iainana 8mm volom-bolo vita amin'ny volom-borona voajanahary ...
Dongshen makiazy borosy taovolo vita amin'ny vy ...
Dongshen kalitao vita amin'ny plastika mainty avo lenta synt ...
Faritra fiharatra, Mametraha makiazy borosy, borosy makiazy napetraka, Manaova borosy, Fitaovana borosy makiazy, Barber Shave,